Amaphrojekthi Wokukhulisa Abakhi Benkampani E-Arab eGibhithe - I-Ellicott Dredges Blog
Izinkontileka zama-Arab zisebenzisa i-Ellicott® Brand Dredges Ngokukhethekile Ukuhlangabezana Nezidingo Zayo Zokukhipha
Amaphrojekthi amakhulu kunawo wonke akhona afaka i-East Port-Said Axial Port. Ukuklanywa nokwakhiwa kwechweba elisha empumalanga yePort Said By-pass kuzohlangabezana nesidingo esilindelekile sokuthuthwa kwasolwandle. Isigaba sokuqala salolu hlelo sizofaka ukwakhiwa kwesiteshi sokungena, isisekelo sokujika, isikebhe esingenalutho, isiteshi esinqamulelayo, kanye nokwandiswa kwePort Said By-Pass. Amabhidi atholakala ngasekupheleni kwe-1998 kanti umklomelo kulindeleke ukuthi uphele unyaka.
IPort-Said I-Axial Port
Ukwehla okuhleliwe kungamanani angaphezu kwe-100M m3. Umkhawulo umayelana ne-20 km2. Kungakho i-East Port ibaluleke kakhulu ukusiza ekuthengisweni kwamanye amazwe njengoba kuzosungulwa indawo enkulu yezimboni nezolimo ngaphezu kwezinkulungwane zama-feddans esiteshini i-Elsalam. Ichweba lizokwakhiwa nge-4,500 feddan (4,669 ac.), Futhi lokhu kudinga amaphrojekthi we-15,000 feddan (15,555 ac.) Amaphrojekthi wezimboni, izitolo, kanye nezindawo zamahhala. Ichweba elisha kufanele lihlale futhi lisebenze zonke lezi zinto ezenzekayo.
Lokhu kungenye yamaphrojekthi kazwelonke abaluleke kakhulu asebenzisa ezomnotho wezwe laseGibhithe ngale ndlela elandelayo:
• Ukuheha kwezentengiselwano zezitsha eMedithera ezifika ku- $ 6M / yr ekhulisa i-8.0% ngonyaka.
• Ukusebenzela izindawo eziseduze zezimboni nezamahhala.
• Zonke izifundo ezenziwayo zifaka phakathi ukuthi leli chweba lizoheha cishe ama-3.0 M TEU's ngezigaba kuze kube unyaka ka-2010.
Isigaba sokuqala sizobandakanya ama-quays wokwakha anebude obungu-2,150 m kanye nokubeka idokodo ekujuleni kwe-17m. I-terminal izoba namandla we-1.5M, 20-ft unit units (TEU's) ngonyaka esigabeni sayo sokuqala. Kukhuphukela kuma-3.0M TEU ngonyaka esigabeni sesibili.
I-North Alsukhna Port
I-dredging ilinganiselwa cishe ku-40M m3. Mayelana neNorth Suez Gulf, leli chweba elisha lizosebenza indawo enkulu yezimboni zezimboni ngakho-ke ukuthuthukiswa kubalulekile futhi ukuxhumana nezinye izindawo kubalulekile. INorth Suez Gulf iyakufanelekela ukuzuza esikhundleni sayo kanye nesimo futhi kufanele ikwazi ukwanda nokuxhumana.
Uhulumeni waseRiphabhlikhi yase-Arabhu usungule ukuthuthukiswa, ukuklanywa nokwakhiwa kwetheku elisha eNyakatho ye-Alsukhna eGulf of Suez ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezilindelekile zokuhamba olwandle.
Isigaba sokuqala sale phrojekthi sizofaka ukwakhiwa kwesishibhisi esisodwa se-750 m-ubude (ngezindonga ezimbili zikalayini), isiteshi sokufinyelela, umbuthano ophendukayo, kanye nabahambisi bezindiza. Indawo ebekelwe isigaba sokuqala ingasenyakatho yendawo yephrojekthi enobude obucishe bube yi-5-km ukusuka eSuez. Umgwaqo omkhulu we-Alsukhna oya ogwini lwe-Gulf nobubanzi obuyi-2km, nomngcele oseningizimu weSky Hawk Touristic Village.
Osonkontileka bama-Arabhu Bamemezela Isivumelwano Sokwakha Umkhiqizo We-Ellicott® “Dragon®”UDredge eGibhithe
Ellicott® AmaDredits (IBaltimore, MD USA), umkhiqizi omdala futhi omkhulu kunabo bonke emhlabeni wokusika ama-cutter dredges, umemezele inkontileka no Osonkontileka abangama-Arab (Cairo, Egypt) ukwakha i-Series 1870 “Dragon®”Ukungena eGibhithe ngaphansi kwelayisense.
Osonkontileka abangama-Arab, inkampani yokwakha enkulu kunazo zonke eMiddle East, iqhuba umsebenzi wokwakha obiza ngaphezu kwe-US $ 1.5B minyaka yonke. Ibisebenza ekwehliseni isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-30 futhi isebenzisa i-Ellicott® brand dredges kuphela.
Uchungechunge olusha lwe-1870 “Dragon®”I-dredge izokwakhiwa egcekeni lemikhumbi lama-Arab Contractors e-Ismailia usebenzisa u-Ellicott® imiklamo yemikhiqizo kanye nemishini. Amandla azoqhamuka ku-Caterpillar izinjini ezinikezwe ngumthengisi we-CAT wase-Egypt, uMantrac. Ngaphezulu kwe-1755 hp (1.309kw), i-Ellicott® i-dredge izokwazi ukupompa isihlabathi kusuka ekujuleni kwe-50ft (15.2m). I-dredge ibaluleke ngaphezu kwesigidi samadola.
Isakhiwo sizosetshenziselwa ukunikeza impahla yomgwaqo omusha wamazwe omhlaba okhonza iPort Said City, kanye nokubuyiselwa komhlaba endaweni efanayo. Izinkontileka zase-Arab zinenkontileka engu- $ 10M nohulumeni waseGibhithe odinga ukusetshenziswa kwama-Ellicott amaningana® uphawu lomkhumbi emikhunjini yalo. Lezi zingxenye zisebenza ngamaphrojekthi amaningi aqokonyiswa ingqungquthela yabatshalizimali eCairo exhaswa yi-US Trade and Development Agency.
I-Arab Contractors Co ibambe iqhaza kulamaphrojekthi alandelayo:
- Ukuhamba komfula iNayile eLuxer, ngaphansi koMnyango Wezokunisela. Kulinganiselwa ku-6.0 million m3 wokudonsa kabusha, ukuhlanza, nokudonsa ukuze kufinyelele ezingeni -4 lenkambo yokuhamba ngomfula.
- Oyoan Mousa Electricity Station, Ministry of Electricity 3.3 million m3 of dredging, kubandakanya ukumbiwa kwesiteshi sokungena nokuphuma kwesiteshi samandla esihlabathini nasetsheni elithile.
- IPort Said Ring-Road Second Stage, iPort Said Governorate. Dredging Manzalah Lake ukuqedela ukwakhiwa komgwaqo omkhulu osuka eRas el Ash uye eDoneletta City.
Ishicilelwe kabusha kusuka kuWorld Dredging & Mining Construction